यहाँ पुग्दा जोकोहीलाई अचम्म लाग्न सक्छ, ५० मिटरको दुरीमै दुई पक्की पुल ! - Sidha News
यहाँ पुग्दा जोकोहीलाई अचम्म लाग्न सक्छ, ५० मिटरको दुरीमै दुई पक्की पुल !
रोल्पा। माडीखोलामा नजिकै दुईवटा पुल देख्दा जोकोहीलाई अचम्म लाग्न सक्छ ! धेरै नदी र खोलामा पुल नभएकाबेला एकै ठाउँमा दुईवटा पुल देख्दा आश्चर्य लाग्नु स्वभाविक हो। तर करिब ५० मिटर दूरी नजिक पक्की र बेलीब्रीज देखिने अवस्था आउनुमा लामो कथा छ।
एक दशकदेखि यो खोलामा पक्की पुल निर्माण कार्य अलपत्र थियो। दुईवटा पिलर ठड्याएर लामा धमे्रन्द्र जेभी कन्ट्रक्सनका ठेकेदार बसन्त डिसीले पुल अलपत्र छाडेका थिए। प्यूठान चकचकेस्थित सडक डिभिजन कार्यालय र निर्माण कम्पनीबीच २०६६ असार १९ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अवधि सकिन लागेका बेला पुल निर्माण गर्न झुल्किएका ठेकेदारले डिजाइन इष्टिमेट गलत भएको भन्दै काम रोके। पुनः डिजाइन इष्टिमेट गरेर ठेक्का सम्झौता गरेपछि दुईवटा पिलर ठड्याएर ठेकेदार बेपत्ता भए। यो खबर विस्तृतमा आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खेमबहादुर बुढाले लेखेका छन्।
पुल अलपत्र पारेपछि सरकारले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेर पुनः टेन्डर आव्हान गर्‍यो। २०७५ असार ३० गते सडक डिभिजन र निर्माण कम्पनी एसिट टिक÷राज जेभीसँग नयाँ ठेक्का सम्झौता भयो। ३ करोड ३५ लाखमा सम्झौता भएको पुल १७ महिनामा सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि थियो। तर एक दशकसम्म अलपत्र परेको पुल ११ महिनामै सम्पन्न भयो। निर्माण व्यवसायी राजवीर सम्झौता अवधिभन्दा पहिले नै पुल सम्पन्न गरे।
‘जिल्लाकै सामरिक महत्वको पुल भएकाले अहोरात्र खटिएर निर्माण सम्पन्न गरेँ’ उनले भने, ‘समयमै पुल बनेपछि सबै स्थानीय खुसी छन्। धेरैले मलाई धन्यवाद दिइरहेका छन्। पुल नहुँदा पश्चिमी रोल्पाका आधा दर्जन बढी स्थानीय तह र छिमेकी जिल्ला दाङ, सल्यान, रुकुम आवतजावतमा निकै सास्ती हुने गरेको थियो। सदरमुकाम लिबाङसँग जोडिने पुल नबन्दा वर्षात्का बेला यातायातका साधन चल्न सक्दैनथे। हिउँदको समयमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले खोलामा अस्थायी काठेपुल निर्माण गरेर यातायात सुचारु गर्दै आएको थियो।